राती कुन दिशामा फर्केर सुत्नु शुभ हुन्छ त ? जान्नुहोस् .. – Krazy NepaL
राती कुन दिशामा फर्केर सुत्नु शुभ हुन्छ त ? जान्नुहोस् ..
January 27, 2021 510
वास्तु शास्त्रका अनुसार गहिरो निद्रामा हामी शक्ति स्रोतहरूसँग जोडिएका हुन्छौँ। यो सम्बन्धले एक शान्त र आफ्नो अस्तित्वको बारेमा उत्साहित बनाउँछ। कति लामो समय सुत्नु हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छैन, महत्त्वपूर्ण भनेको कति गहिरो र अप्रबन्धित निद्रा हो। शान्त र निर्बाध निद्राको लागि वास्तुमा केहि नियमहरू छन्, जसको पालना गरेर प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ र सक्रिय जीवन बिताउन सक्छ।
उत्तर दिशामा सुत्नु हुँदैन
वैज्ञानिक परीक्षणबाट यो स्पष्ट भएको छ कि मानव शरीर चुम्बकीय तरंगबाट प्रभावित हुन्छ र स्वयम् सूक्ष्म चुम्बकीय तरंगहरू फाल्छ जसले प्रभामण्डलमा आकर्षण र विचलन उत्पन्न गर्छ। जसरी पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव हुन्छ, मानव शरीरको मस्तिष्कको भागलाई पनि उत्तरी ध्रुव मानिन्छ। त्यसकारण पूर्ण सुखद आरामका लागि सुत्दा टाउको सधैं दक्षिण दिशा तर्फ हुनुपर्छ ताकि चुम्बकीय छालहरू सही दिशामा प्रवाह हुन सकोस्। यसको विपरीत, उत्तर दिशा मा टाउको राखेर सुत्दा चुम्बकीय प्रवाह बिग्रन्छ जसको कारण मानिस राम्रोसँग सुत्न सक्षम हुँदैन। वास्तुका अनुसार उत्तर दिशामा टाउको फर्काएर निदाउँदा निद्रा अवरुद्ध हुन्छ, जसको कारण टाउको दुखाइको समस्या आउन सक्छ साथै मानसिक बिमारीको पनि सामना गर्नुपर्नेछ।
आध्यात्मिकता र एकाग्रता को लागी पूर्वी दिशा
वास्तुशास्त्रमा देवताहरूको राजा इन्द्रलाइ पूर्व दिशाको स्वामी मानिन्छ। यस दिशामा टाउको फर्काएर सुत्दा, निद्रा, मेमोरी, एकाग्रता र स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ र अध्यात्मतिर मानिसको झुकाव बढ्छ। वास्तुका अनुसार, विद्यार्थीहरूले पूर्व दिशामा शिर राखेर सुत्दा स्मृति बढाउन र एकाग्रता बढाउन लाभदायक हुन सक्छ।
पश्चिम दिशाको प्रभाव
जलको देवता वरुणलाई पश्चिमी दिशाको स्वामी भनिएको छ, जसले हाम्रो आत्मा, आध्यात्मिक भावना र विचारहरूमा प्रभाव पार्छ। वास्तुका अनुसार पश्चिम दिशामा सुत्नु पनि अनुकूल छ किनकि यस दिशाले नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा र समृद्धिलाई बढाउँछ।
धन, खुशी, समृद्धि को लागी दक्षिण दिशा
मृ-त्युका देवता यम दक्षिण दिशाका स्वामी हुन्। यो दिशातिर टाउको राखेर सुत्नु उत्तम हुन्छ। वास्तुमा भनिएको छ कि स्वस्थ जीवन र लामो जीवनको लागि आफ्नो टाउको दक्षिण र उत्तर तिर खुट्टा फर्काएर सुत्न जरूरी छ। यस दिशा तिर टाउको राखेर सुत्दा धन, खुशी, समृद्धि र ख्याति प्राप्ति हुन्छ।
Prevयी हुन् १५ मिनेटमै अनुहारको चमक बढाउने घरेलु उपाय
Nextमहिनावारीका बेला कति समयमा प्याड परिवर्तन गर्नु राम्रो ? ध्यान दिनैपर्ने कुरा
यस्ता गुण भएकी युवती असाध्यै भाग्यमानी ,
मुलुकभर ४ हजार ७६२ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, ११४ को मृत्यु
तपाईका दुई हत्केला जोड्दा आधा चन्द्रमा बन्छ ? उसोभए तपाई भाग्यमानी हुनुहुन्छ
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (45432)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (24034)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (18599)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (16799)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (14994)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13925)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (12968)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12854)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12438)